Budata Drop Out APK maka Android
Budata Drop Out
Budata Drop Out,
Drop Out bụ egwuregwu mkpanaka maka ndị nna ukwu nke egwuregwu nka siri ike dabere na ịfefe bọọlụ na-ada netiti ikpo okwu na-akpụ akpụ. Egwuregwu obere obere, nke dị maka nbudata nefu na ikpo okwu Android, bụ egwuregwu na-atọ ụtọ nke nwere ike ịme ngwa ngwa nagbanyeghị ebe ọ bụla oge na-agafe.
Nime egwuregwu ahụ, anyị na-agbalị iburu bọọlụ na-acha ọcha nke na-ada ngwa ngwa ma kwụsị ịdaba dịka ugboro aka anyị si dị, anyị na-agbalịkwa ịfefe ya netiti ikpo okwu nwere ọdịdị geometric. Nezie, ọ dịghị mfe ịnwa si nime oghere ndị buru ibu nke na ọ bụ nanị bọọlụ ga-agafe. Nebe a, e kwesịghị ikwu na ọ bụ egwuregwu na-eme ka njedebe nke ndidi.
Negwuregwu agbadoro akara, anyị ga-emetụ akụkụ ọ bụla nke ihuenyo aka obere oge iji mee ka bọọlụ na-ada ada kwụsịlata. Ozugbo anyị wepụrụ mkpịsị aka anyị, bọọlụ ahụ na-ada nọsọ zuru oke ma anyị na-ehichapụ isi ihe anyị na-erubeghị.
Drop Out Ụdịdị
Mmepụta: The Blu Market